Toerana kely fitsidihana 11 kely eran-tany | Vaovao momba ny dia
Tamin'ny taon-dasa dia namaky ny rakitsorany ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena i Espana tamin'ny fahatongavana 82 tapitrisa, izay 8,9% mihoatra ny tamin'ny 2016 araka ny statistikan'ny INE (National Institute of Statistics) sy ny tombana natao tamin'ny mombamomba an'i Turespaña.
Ireo tarehimarika ireo dia mametraka an'i Espana amin'ny laharana faharoa amin'ny resaka fitsidihana iraisam-pirenena manerantany, nihoatra an'i Etazonia voalohany ary manaraka ny faran'ny Frantsa.
Na izany aza, ny firenena hafa dia mampiseho tarehimarika maotina kokoa. Rehefa avy nandinika ny antontan'isa momba ny taona 2016 avy amin'ny World Tourism Organization, amin'ireto lahatsoratra manaraka ireto dia manangona ny sasany amin'ireo toerana itodihanao izay ahitanao ireo manintona mpizahatany tena mahaliana nefa tsy misy ny ankamaroan'ny toerana hafa.
1.4 Timor Atsinanana
3.3 Sao Tome sy Principe
4.1 Nosy Anguilla
4.2 Nosy Montserrat
Anisan'ny antony hitsidihana an'i Bangladesh ny toerana maro an'ny vakoka eran-tany toa ny Ruins Buddhist Vihara of Paharpur. Ity toerana ity, izay fantatra amin'ny anarana hoe Somapura Mahavira, dia vavolom-pankasitrahana tamin'ny andron'ny Buddhism Mahayana tamin'ny taonjato faha-2016 tao Bengal ary ivom-pahaizana malaza hatramin'ny taonjato faha-125.000. Tamin'ny taona XNUMX dia notsidihan'ny olona XNUMX i Bhutan.
Any Himalaya no misy, ity firenena aziatika atsimo ity dia nahazo mpitsidika 155.000 tamin'ny 2016. Mikatsaka ny hampiroborobo ny indostrian'ny fizahantany any Bhutan ny governemanta saingy amin'ny fomba maharitra, izany hoe ny fisorohana ny mpizahatany be loatra. Amin'izany fomba izany dia takiana amin'ireo mpitsidika ny hanakarama ny fivezivezeny, ny toeram-ponenany, ny sakafony ary ny mpitari-dalana eo an-toerana. Raha atotaly dia tombanana fa ny fandaniana farany ambany isaky ny olona dia eo anelanelan'ny 200 sy 250 dolara isan'andro mandritra ny fitsidihany ny firenena. Ankoatr'izay, ny governemanta dia mitaky hetra amin'ny fampandrosoana $ 65 isan'andro.
Sary | Investasian
Brunei dia iray amin'ireo firenena manankarena indrindra manerantany noho ny solika. Na izany aza, Ny tanànany sy ny tanànany dia mbola voahodidin'ny ala tropikaly saika virjiny, izay mahatonga azy io ho zava-mahasarika tontolo iainana. Na iza na iza mamakivaky ny ala maitso ao Ulu Temburong dia tsy miraika. Na iza no mandeha mamaky ny tsena alina ao Bandar Seri Begawan, renivohitra. Tamin'ny 2016 ity firenena kely any amin'ny nosy Borneo ity dia nahazo fitsidihan'ny mpitsangatsangana iraisam-pirenena 219.000 XNUMX.
Ny tantaran'i Timor Atsinanana dia mifandray akaiky amin'i Portugal, zanatany izay zanatany. Dili, renivohiny, no ivon-toeran'ny firenena saingy ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny dia Mety ny mitsidika ny nosy Atauro hahafantarana ny tendrombohitra mahafinaritra, ny morontsirak'ireo paradisa, ary ny fampiharana snorkeling. Angamba izany no nahatonga ity firenena Aziatika atsimo atsinanana ity notsidihin'ny olona 66.000 tamin'ny taona 2016. Raha afaka mamarana ny olan'ny herisetran'ny andian-jiolahimboto sy ny halatra fiara dia mety hampitombo io isa io mandritra ny taona vitsivitsy ho avy ity ity toerana tsara tarehy ity.
Miaraka amin'ny 160 km2 isika dia miatrika ny firenena fahenina kely indrindra eran'izao tontolo izao, izay voahodidin'ny firenena hafa toa an'i Suisse sy Austria ka tsy tafiditra amin'ny ranomasina. Liechtenstein dia miorina amin'ny faritra alpine iray manontolo ary ny antsasaky ny faritaniny dia valan-javaboary voajanahary. Tsy mahagaga, noho izany, fa ity firenena ity dia andriamby ho an'ny tontolo iainana eoropeanina. Noho izany, tamin'ny 2016 dia nahazo ny fitsidihan'ny mpitsangatsangana 69.000 izay nanararaotra ny fijanonany ihany koa hitsidika an'i Vaduz sy ny tranony medieval na Triensenberg, foibe fizahan-tany amin'ny ririnina izay manana toeram-pialan-tsasatra sy farihy iray hanaovana fanazaran-tena amin'ny fahavaratra.
Amin'ny fomba ofisialy ny Repoblika Serene Malalaka indrindra any San Marino, izy no fanjakana lava indrindra eto an-tany. Toerana mahafinaritra hitsidihana eo afovoan'i Italia. Tamin'ny 2016, mpitsidika iraisam-pirenena 60.000 no nanao izany.
Ny ivon-toerana manan-tantara an'i San Marino sy Mount Titano dia nambara fa Toerana Lova Iraisam-pirenena XNUMX taona lasa izay. Ny faritra dia misy rindrina, tilikambo ary mimanda ary koa ny efitrano taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, ny teatra Titano tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny Palazzo Pubblico ary ny basilika neoklasika tamin'ny taonjato faha-XNUMX:
Ny ady sy ny fifandonana namely ny firenena taona lasa izay dia namela ny lazany tany Sierra Leone nandritra ny fotoana ela. Na izany aza, nanomboka ny taona 2002 dia nitombo ny isan'ireo mpitsidika, ary olona 74.400 2016 no nihaona taminy tamin'ny XNUMX.
Ny manintona fizahan-tany lehibe indrindra dia tsy goavana fa voajanahary. Ny Peninsula Freetown dia manolotra morontsiraka sasany tsara indrindra amin'ny morontsiraka andrefan'i Afrika iray manontolo. Any amin'ny tany sisa dia mifandimby ny tendrombohitra sy ny lemaka. Ho fanampin'izany, toy ny any amin'ny firenena afrikanina hafa, i Sierra Leone dia manana zaridaina sy tahiry marobe toa ny Outamba, Loma Moutains Forest Reserve na Tiwai Island Wildlife Sanctuary, izay mendrika hitsidika azy ireo hijery biby miaina afrikanina velona. Traikefa tsy manam-paharoa!
Nifidy iray amin'ireo toerana 10 tsara indrindra hitsidihan'i Lonely Planet, Djibouti dia nahazo mpitsidika 51.000 tamin'ny 2016, azo inoana fa notarihin'ny fanahy mpihaza, tontolo miavaka ary rano mafana., mety amin'ny antsitrika sy antsitrika scuba. Eto an-drenivohitra dia misy ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fifanoheran-kevitra ara-kolontsaina sy sosialy mahaliana.
Ny Lake Assal, Ghoubbet Bay ary ny Lake Abbé no sasany amin'ireo tranonkala ilaina hitsidihana mandritra ny fitsidihana ity firenena afrikanina manamorona an'i Eritrea, Somalia ary Etiopia ity.
Sary | Ilay mpandeha tany The Country
Ity zanatany Portiogey teo aloha ity dia mbola tsy voavaha fa Izy io dia manana ny akora rehetra hahatongavany ho tonga làlana tonga lafatra ho an'ireo mpitsangatsangana sy ho an'ireo izay te hiala sasatra fotsiny eo amin'ireo morontsirak'ireo paradisa. Toerana iray hankafizana ny maritrano kolonialy Portiogey mahafinaritra ihany koa. Ireo mpitsidika 8.000 nananan'ny firenena tamin'ny 2016 araka ny antontan'isan'ny World Tourism Organization dia afaka mijoro ho vavolom-belona amin'izany.
Sary | Gazety faran'ny herinandro
Tahaka ny Nosy Montserrat, ny Nosy Anguilla dia ao anatin'ny faritanin'ny British Overseas Territories ihany koa. Tsy toy ny toerana itodiana hafa izy io, sady mora idirana no mora vidy. Matetika izy io dia manatrika mpizahatany manana fahefana mividy avo izay mitady fialan-tsasatra amin'ireo morontsiraka fasika fotsy mahafinaritra sy rano madio mangarahara. Tamin'ny taona 2016 dia nahazo mpitsangatsangana 72.000 izy.
Any atsimo andrefan'ny Puerto Rico sy any amin'ny rano Karaiba no misy ny Nosy Montserrat, izay hitan'i Christopher Columbus tamin'ny 1493. Faritany britanika ampitan-dranomasina izy amin'izao fotoana izao izay nahazo mpizahatany 2016 tamin'ny 9.000 na dia ny ampahatelon'ny nosy aza no azon'ny mpitsidika. Ary nanomboka tamin'ny volana jolay 1995 ilay volkano izay tsy nihetsika nandritra ny taonjato maro dia nanomboka nandroaka lavenona sy etona nahatonga ny fandaozana ny renivohitry ny nosy.
Inona no hita eto amin'ny Nosy Montserrat? Ny ala maitso maitso mahatalanjona, ny morontsiraka mahafinaritra misy rano turquoise ary ny sisa tavela amin'i Plymouth, izay tanàna matoatoa ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Toerana 11 notsidihina kely dia kely teto amin'izao tontolo izao